I-LK Ranch Cabin. Ukudoba Kwangasese
Ikhabethe lethu elingu-640 sq. ft. litholakala epulazini lethu elisebenzayo elingamahektha angu-80. Ipulazi selineminyaka engaphezu kuka-120 liyingxenye yomkhaya wethu! Izivakashi zamukelekile ukuthi zijabulele ukudoba okuyimfihlo endaweni yethu e-Clear Creek. Ukufinyelela komphakathi ngokudoba iRuby River nakho kungaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo. Amalayisense okudoba ayadingeka. IDolobha laseVirginia lingamamayela angu-10 kuphela ukuya empumalanga kanti i-Ruby Reservoir iseningizimu-ntshonalanga, cishe amamayela ayi-6.
Igumbi lokulala elikhulu linombhede olingana nendlovukazi, ikhabethe kanye nesigqoko sempahla yakho. Kukhona ne-tv eyengeziwe. I-loft inemibhede emibili engamawele kanye ne-futon. Ubude be-loft bufushane. Ngingu-5ft ubude futhi ngishaya ikhanda lami emishayweni! Isitebhisi sinesitebhisi, ngakho-ke sicela uqaphele izingane ezincane! Cishe ayizifanele izingane ezingaphansi kweminyaka engu-4 y/o. Indlu yokugezela ineshawa kuphela futhi inewasha nendawo yokomisa. Uzoba "namanzi ashisayo uma kudingeka" ukuze uthole amanzi ashisayo angapheli. Yonke enye ikhabethe inomqondo ovulekile ukuze ujabulele inkampani yakho. Sinompheme omuhle ngaphambili one-grill ye-BBQ kanye nomgodi womlilo. Woza futhi ujabulele ukubuka!
Ikhabhinethi yethu icishe ibe ngamamayela angu-1 1/2 eningizimu-ntshonalanga ye-Alder. Sinemayela elingu-1/4 lokudoba kwangasese e-Clear Creek, enombono omuhle ukusuka kuvulandi ongaphambili. Ukufinyelela kweRuby River Fishing kungaphakathi kwebanga lokuhamba. Lena ipulazi elisebenzayo, ngakho-ke amaloli angase aphume futhi aphume ngesikhathi sokuvuna.